နော်လွီဇာ ဘင်ဆင် - ဝီကီပီးဒီးယား
နော်လီဇာ ဘင်ဆင် (အင်္ဂလိပ်: Naw Louisa Benson) (၁၉၄၁-၂၀၁၀) သည် ကရင်လူမျိုး အလှမယ်၊ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ လှုပ်ရှားသူ ဖြစ်သည်။
(1941-03-10)မတ် ၁၀၊ ၁၉၄၁
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၀(2010-02-02) (အသက် ၆၈)
အလှမယ်၊ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာ လှုပ်ရှားသူ
လင်းထင် (m. 1964–65)
ဂလန်း ခရေ့ (m. 1967–2010)
၂ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု
၂.၁ သီဆိုသော သီချင်းများ
၂.၂ ပါဝင်သော ဇာတ်ကားများ
၃ တိုင်းရင်းသားရေး လှုပ်ရှားမှု
၁၉၄၁ ခု၊ မတ်လ ၁၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်၊ ရှစ်မိုင်နေ စောဘင်ဆင်နှင့် နော်ချစ်ခင် တို့မှ မွေးသည်။ စောဘင်ဆင်သည် ယခင်က အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း ခိုဒါ မိသားစုမှ ဖြစ်ပြီး မော့ဆက် ဘန်ဇီယွန် ကိုဒါ (Moses Ben-Zion Kodar) ဟု တွင်သည်။ ဂျူးဘာသာဝင် ဖြစ်သည်။ နော်ချစ်ခင်နှင့် ၁၉၃၉ တွင် လက်ထပ်ပြီးနောက် နှစ်ခြင်းခံကာ ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာသည်။  နော်လီဇာမှာ မောင်နှမ ၃ ယောက်အနက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်များ ဝင်သည့်အခါ အရီးများရှိသည့် ကာလကတ္တားသို့ ရှောင်သည်။
၁၉၆၃ ခုတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ဘွဲ့ရသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဘော်စတွန်ရှိ တက်ဖ် (Tufts) တက္ကသိုလ်သို့ သွားကာ ပညာဆက်သင်သည်။ ထိုမှပြန်လာသော် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ နည်းပြ ဖြစ်လာသည်။
ရန်ကုန် အောင်ဆန်းကွင်း၌ ကျင်းပသည့် မယ်ဗမာပြိုင်ပွဲတွင် ၁၉၅၆ ခုနှစ်၌ လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၈ ၌လည်းကောင်း နှစ်ကြိမ်တိုင် ဆုရသည်။ 
မယ်ဗမာရပြီးနောက် ကမ်းလှမ်းမှုများရှိရာ ရုပ်ရှင် ရိုက်သည်။ သီချင်းလည်း ဆိုသည်။
ပြုံးချစ်သူ စန္ဒယား ချစ်မောင်
ဝတ်ရည်နွယ် စန္ဒယား ချစ်မောင်
ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဦးမင်းဒင် ၁၉၅၈ စံတော်သစ် ရုပ်ရှင်
ပိတောက်တွေ ပွင့်ပြန်ပေ့ါ ၁၉၅၈ ဝေဇင်
လင်းထင် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် လူငယ်များအား စည်းရုံးကာ နော်လွီဇာက ဗိုလ်မြထံ သွားပေါင်းသည်။ တပ်မဟာ(၅) အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာသည်။ ဗိုလ်မြမှာ သဘောထားပြင်းသည့်အတွက် ပြန်ထွက်ကာ ထိုင်းသို့ ကူးသည်။
အမေရိကန်သို့ ရောက်ပြီးနောက် ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာရေးရာ ဘာသာဖြင့် မဟာဘွဲ့ ယူသည်။ ဘားမားဖိုရမ် (Burma Forum) နှင့် ဗမာအတွက် အမေရိကားမှလှုပ်ရှားမှု (US Campaign for Burma) တို့တွင် ပါဝင်ကာ ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့ အကျိုးအတွက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ရှိ ကရင်ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီများ ပေးသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ရန်ကုန်လာသည့် ကရင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၊ အမှတ် (၅) တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် လင်းထင် နှင့် ချစ်ကြိုက်ကာ ၁၉၆၄ ခု၊ မေလ ၁၂ ရက်၌ လက်ထပ်သည်။ ၁၉၆၅ တွင် လင်းထင်က တောပြန်ခိုရန် ကြိုးစားရာ သထုံအခြေစိုက် တပ်ရင်းတစ်ခုက အသေဖမ်းမိသည်။
ထိုင်းအခြေစိုက် အမေရိကန်ရေတပ် အရာရှိ၊ တက်ဖ် တက္ကသိုလ်၌ စာသင်ဖက်ဖြစ်ဖူးသူ ဂလန်းခရေ့ (Glenn Campbell Craig) နှင့် ၁၉၆၇ တွင် လက်ထပ်ကာ အမေရိကန်သို့ သွားသည်။  ချာမိန်း (Charmaine)၊ ကောလန်း (Colleen ) နှင့် ဘရက်ဖို့ (Bradford) ဟူသော သားသမီး ၃ ယောက်ရသည်။
ဦးနှောက်ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ၂၀၁၀ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်တွင် ဆန်တာ မော်နီကာ၌ ကွယ်လွန်သည်။ 
မိခင်၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ချာမိန်းက မယ်ဗမာ (Miss Burma) အမည်ဖြင့် စာအုပ်ထုတ်သည်။ မြန်မာဘာသာသို့ ဝင်းငြိမ်းက ပြန်မည်ဖြစ်သည်။ 
↑ Catriona Knapman (Oct 2018) "Karen Rebel". Mekong Review
↑ ဇွန်ပန်းပွင့် (၂၃ ဩ ၂၀၁၇) "The Many Crowns of 'Miss Burma'. မြန်မာတိုင်းမ်.
↑ စောရန်နိုင် (၄ ဖေ ၂၀၁၀) "Louisa Benson Craig Dies Aged 69"။ ဧရာဝတီ။
↑ Louisa Craig (1941-2010). FindaGrave.
↑ Charmaine Craig (2017) "Miss Burma". Grove Press.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နော်လွီဇာ_ဘင်ဆင်&oldid=452483" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ မတ် ၂၀၁၉၊ ၀၉:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။